Usoro ọgwụgwọ akwadoro maka broilers
1. 1-7days: ọgwụgwọ oyi: 0.2ml/pc maka ị drinkingụ mmanya mbụ. jiri maka ụbọchị 3-5 na-aga n'ihu ụbọchị 1-5: ọgwụgwọ proventriculitis: 500g gwakọtara nri 100 n'arọ. Jiri maka ụbọchị 5 na -aga n'ihu. Mgbochi na ọgwụgwọ: Meziwanye nguzogide ahụ, adenomyosis gastritis, belata mgbochi mgbochi, ma hụ na ...
Na mkpokọta, enwere ụdị ọgwụ ọgwụ China dị 12,807 na ụdị anụmanụ anụmanụ 1,581, ihe ruru 12%. N'ime akụ ndị a, ụdị anụ ọhịa 161 nọ n'ihe ize ndụ. N'ime ha, a na -ahụta mpi rhino, ọkpụkpụ agụ, musk na bile ntụ dị ka anụ ọhịa na -adịghị ahụkebe ...
N'ezie, ugbu a, mgbake ahịa ọkụkọ nwekwara ike gbakọọ. Ọnụahịa nke ọtụtụ anụ ọkụkọ erutela n'ogo nke otu oge n'afọ ndị gara aga, ụfọdụ dị elu karịa ọnụ ahịa nkezi n'afọ ndị gara aga. Mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ enwebeghị mkpali ịmụ nwa, nke ahụ bụ n'ihi na ...
Ọdịiche dị n'etiti ngwakọ onyinye na nri premix
site na nchịkwa na 20-09-30
Ndị ọrụ ugbo na anụ ọkụkọ ịhọrọ nri ma ọ bụ, dị ka ụdị anụ ọkụkọ dị iche iche si dị, uto nke ọnọdụ ịhọrọ. Usoro nhọrọ nke ahụ achọrọ bụ dị ka ndị a: Ngwakọta ngwakọta bụ ụdị ngwaahịa nri nwere edo edo yana uru nri zuru oke dabere na ụdị dị iche iche ...